Education – Internet Journal |
EducationHome Category: Education Education နယ်သာလန်အခြေစိုက် EIFL နှင့်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်များ ပူးပေါင်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နားလည်မှု စာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုး Apr 26, 2017 Education အမေရိကန်တက္ကသိုလ် ၆ ကျောင်းမှ ပညာသင်ဆုများ ခေါ်ယူ Apr 07, 2017 Education Webster University မှာ BS in Compuer Science တက်ရောက်နေတဲ့ မမြမဉ္ဇူ Apr 07, 2017 Featured
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ F.I.S တွင် တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် FIS Foundation မှချီးမြှင့်သော ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင် Apr 05, 2017 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များဖြစ်သော Oxford, Cambridge, Harvard... Featured
ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် မဟာဘွဲ့သင်တန်းများ ၀င်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူ Apr 03, 2017 ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက်... Featured
ဘာသာစကားလိုက်စားသူတို့အတွက် ဝေါဟာရသစ်များ လေ့လာနည်း ၁၀ ခု Mar 24, 2017 ဘာသာစကား လေ့လာသူ တစ်ဦးအနေနဲ့ သင်ဟာ ဝေါဟာရ အသစ်တွေကို... Featured
စင်ကာပူနိုင်ငံ Dimensions International College မှ ပေးအပ်မည့် ပညာသင်ဆုများ Mar 24, 2017 UK .Cardiff Metropolitan University မှ ပေးအပ်သော MBA ( Master of Business Administration )ကို စင်ကာပူ Dimensions International College... Featured
Samsung Myanmar ၏ မိုဘိုင်း Software နှင့် Hardware ပြင်ဆင်နည်းသင်တန်းမှ ပထမဆုဖြစ်သည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၀၀ ရရှိခဲ့သော မဖူးပြည့်စုံ Mar 24, 2017 Samsung Tech Institute ၏ မိုဘိုင်း Software နှင့် Hardware ပြင်ဆင်နည်းသင်တန်းမှ... Featured
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ လျှောက်ထားနိုင်တဲ့ ပညာသင်ဆုတွေ အကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်မည် Mar 23, 2017 သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ Trinity College, Dakin University, Macquarie University, University of Technology Sydney (UTS Insearch)... Featured
ကျောင်းအုပ်နဲ့ မိဘကြား ကျောင်းသားရဲ့ အချက်အလက်တွေသိနိုင်ဖို့ App တစ်ခုဖန်တီးထားတယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ သံလွင်ပုဂ္ဂလိက အလယ်တန်းကျောင်း Mar 21, 2017 ကျောင်းအုပ်နဲ့ မိဘကြား ကျောင်းသားရဲ့ အချက်အလက်တွေကို... Featured
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ YSEALI Professional Fellowship program သို့ လျှောက်ထားနိုင် Mar 16, 2017 အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ YSEALI Professional Fellowship Program ကို အောက်တိုဘာလ ၁ ရက် ကနေ... Featured
သင်္ချာမေးခွန်းမှားယွင်းမှုအပေါ် Facebook တွင် ဝေဖန်ထောက်ပြမှုများရှိနေ Mar 16, 2017 ယခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ သင်္ချာဘာသာရပ်... Featured
Business Administration Management ပညာဒါနသင်တန်းဖွင့်မည် Mar 15, 2017 Business Administration Management သင်တန်းကို ပညာဒါနသင်တန်းအဖြစ် မတ်လ ၁၈ ရက် နဲ့ ၁၉ ရက်... 1